Momba anay - Putian City Handsome Home Decor Co., Ltd.
Handsome Home Decor dia ao amin'ny tanànan'i Putian, tanàna amoron-tsiraka atsimo atsinanan'i Sina, natsangana tamin'ny taona 1998, izay manampahaizana manokana amin'ny kanto metaly 3D vita tanana. Hatramin'izao dia misy andiany 4 toy izao manaraka izao:
1) CHB (sary hosodoko aliminioma maro loko)
2) HB (sary hosodoko aluminium)
3) LH (alim-bolan'ny alimo, izay fitambaran'ny sary hosodoko menaka sy sary sokitra aluminium).
4) Hoso-doko LED
Ny orinasanay dia mandrakotra 8000 metatra toradroa sy efamira santimetatra toradroa 1000 metatra toradroa. Mifikitra amin'ny fitsipiky ny "kalitao aloha, serivisy aloha, fanatsarana tsy tapaka sy fanavaozana hihaona amin'ny takian'ny mpanjifa.
Inona ny hosodoko menaka vy 3D
Ny hosodoko menaka vy 3D dia vokatra tena vaovao, loko vita amin'ny takelaka boribory vita amin'ny borosy vita amin'ny alimo izany, tsy mitovy amin'ny sary hosodoko vita amin'ny lamba firakotra, ny metaly dia misy dikany metaly mahery sy misy taratra 3D taratra taratra amin'ny jiro, tsara indrindra ho an'ny trano anatiny, hotely, birao sns. amin'ny haingon-trano.
Ny faritra vita amin'ny aliminioma dia efa voadinika matetika talohan'ny nandokoana. Ny lalan-drà tsara tarehy eo amin'ny solaitran'ny aliminioma dia mila nohosorana im-betsaka mba hampisehoana azy ireo fa malefaka sy velona.
Ny sary hosodoko vita amin'ny aliminioma dia endrika vaovao sy vokatra mitohy avy amin'ny sary hosodoko aliminioma.
Volon-kazo alimina voalamina alohan'ny handokoana eo amin'ny solaitrabe, ary sarony ilay fonosana mazava mba hahatonga ny sary hoso-doko sy ho lavorary.
Drafitra vaovao 30 eo ho eo no novolavolaina isam-bolana ary apetraka ao amin'ny efitrano misy santionany, izay manodidina ny 1000 metatra toradroa. Tongasoa eto izahay hitsidika anay.
Ny ARTANA TANANA dia manatrika ny CANTON FAIR sy ny foara fanaovana fanaka iraisam-pirenena hafa isan-taona, izay mampalaza ny marika sy ny vokatra erak'izao tontolo izao.
Amin'ny ezaka tsy misy fetra, HANDSOME ARTS dia nahazo laza mendrika sy laza tsara teo amin'ireo mpanjifanay tamin'ny fifaninanana tsaratsara kokoa. Tongasoa eto amin'ny fanitarana ny orinasa miaraka aminay!
Fomban'ny efitrano santionany
Seho fampirantiana Canton
Fanadihadiana teo aloha
Hita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampanohananao&oldid=18870745 ''
Faritra indostrialy Chigang, Hanjiang Dist, Putian, Sina